Shiinaha 3 meelood 1 Guri-Barxad Dhexdiisa oo Guriga Ciyaarta ah oo Soo Bedela oo Taambuug leh oo leh wershaddii Tunnel iyo soo saarayaasha | Sicilis
3ba 1 1 Guri-Barbaro / Dibad-Ciyaar Guriga Soobaxa Teendhooyinka leh Tunnel
Magaca Badeecada: 3 1 1 Teendhada Midabada leh ee carruurta
Midabka Badeecada: Casaan / Buluug / Midab
Xirxirida: Bacda Gacanta
Cabir: 260 * 110 * 90cm
Waxyaabaha: dharka Polyester
Da'da: In ka badan 6 bilood
• Dharka midabbada badan leh ayaa dhalaalaya oo soo jiidanaya carruurta da 'kasta leh, waxay qaban kartaa indhaha carruurtaada marka ugu horreysa waxayna gacan ka geysan kartaa kicinta maskaxda carruurtaada waxayna u abuureysaa meel gaar ah oo midab leh oo carruurtaadu ku nastaan.
• Dhar jilicsan & naqshadeynta mesh neefsashada ayaa u oggolaanaysa meel ammaan ah oo bey'ad ku habboon oo carruurtu ku ciyaarto.
• Si fudud loo dejiyo & loo laalaabo boorse khafiif ah oo sita boorso loogu talagalay keydinta habboon.
• Teendhadan ciyaarta ayaa ka dhigaysa meesha ugu habboon ee carruurtu ku ciyaari karto oo ku nasan karto. Waxaa lagu dejin karaa guriga ama bannaanka waxayna carruurta siin karaan dareen asturnaan iyo meel gaar ahaaneed iyadoo waalidiinta loo oggolaanayo inay la socdaan nabadgelyadooda.
• Fikradda Hadiyadaha Carruurta Weyn.
• Ku maal-geli Ilmahaaga Waqtigiisa Madaddaalada ee Hal-abuurka leh Taleefishinka aan tooska ahayn, kan aan kiniinka ahayn, Haddiyadda aan laptop-ka ahayn. Haddii aad adigu leedahay ama aad u raadinayso hadiyad wanaagsan cunugga saaxiib ama xubin qoys, teendhada ciyaarta ayaa ah hadiyad weyn.
• Naqshadeynta 3-in-1: Carruurta ugu cusub ee '3Pcs' waxay ku ciyaaraan alaabada carruurta ku ciyaaraan teendhada waxaa ka mid ah teendho saddex xagal ah, teendho tunel ah iyo god bolool. Qayb kasta waxaa loo isticmaali karaa wadajir ama gooni. Waxaan ku siin karnaa carruurta garoon lagu ciyaaro xitaa guriga. Isku-darka carruurta ee teendhooyinka ayaa ah hadiyadda ugu fiican ee socod baradka.
• Waxyaabaha bey'ada u roon: Ka sameysan 100% polyester laba jibbaaran oo la dhaqi karo, dhar dhaadheer oo u adkeysanaya xirashada iyo jeexjeexa laakiin mesh neefsanaya iyo naqshad jilicsan iyo qaab suuf jilicsan ayaa cunugaada siinaya waayo aragnimo farxad leh. ilaalinta ugu fiican iyo farxadda ugu weyn.
• Alaabta carruurtu ku ciyaarto ee la qaadan karo: Way fududahay in la soo baxo oo la laallaabo. Taambuugga godka weyn ayaa ku soo bixi kara ilbidhiqsiga, teendhada ciyaarta ayaa ku habboon socodbaradka iyo carruurta ku ciyaareysa gudaha iyo dibedda Wuxuu la yimaadaa jiinyeer khafiif ah oo qaada boorso loogu talagalay keydinta habboon. Alaabada hadiyad ee fikradda ah ee wiilasha ama gabdhaha. (Kubadaha laguma daro).
• Iibsasho ujeeddo badan leh: Guri lagu ciyaaro oo loogu talagalay carruurta ayaa u oggolaanaysa ilmahaaga inuu seexdo oo wax akhriyo, halka tunnelku uu jimicsado awoodda gurguurashada ee ilmaha, cunuguna wuxuu dhigaa toy kasta oo uu jecel yahay barkadda inuu ku dhex ciyaaro. Mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho xulashada hadiyadda. Alaabtan carruurtu ku ciyaaraan ee ciyaarta lagu ciyaaro waxay u noqon lahayd hadiyad ku habboon Maalinta dhalashada, Kirismaska, ama uun la yaab carruurtaada, ciyaalka socod baradka ugu fiican ee xafladaha, dalxiisyada, jardiinooyinka, xafladaha ama guriga.
• Madadaalo aan xad lahayn oo loogu talagalay carruurta: Naqshadaynta isku xidhka 3 1 ee u dhexeeya carruurtu waxay ku ciyaaraan teendhada, tunnelka socod baradka iyo godka kubbadda ayaa carruurta u keenaya baashaal badan. Caruurtan caruurtu ku ciyaaraan teendhooyinkooda waxay ka caawiyaan horumarinta murqaha cududda iyo lugaha iyo xirfadaha guud ee dhaqdhaqaaqa. Dhuumashada, guurguurashada, boodka iyo dib u noqoshada carruurta ciyaarta teendhada. Carruurtaadu waxay ku raaxeysan doonaan saacado baashaal teendhadan ciyaarta, tani waa meel ku habboon carruurta inay wax ku bartaan inta ay ciyaarayaan.
Hore: Taambuugga Taambuugga 5/7 Teendhada Qoyska Qofka Labaad Lakab Dibedda ah
Xiga: Carruurta Kaamamka Ciyaaraha Ciyaaraha ayaa Soo Baxa Teendhooyinka Dibedda ee Carruurta Ciyaarta Carruurta ee Teendhada Teendhada
Teendhada Soo Bax
Bannaanka Kaambuugga Meel-maridda Baaskiillada Wax Lagu kariyo oo P ...
Taambuugga teendhada 5/7 Qof teendhada Qoyska Laba Laye ...
Teendhada dusha sare ee Xtm, Bilowga Dabka Bilowga, Bilowga Dabka Magnesium, Teendhada Dibadda ee Joogtada ah, Taambuugga la buufin karo, Qalabka Badbaadinta Degdegga ah,